Ithegi: ukukhangela okuhlawulelweyo | Martech Zone
Ithegi: ukukhangela okuhlawulelweyo
Kwisifundo sayo sesine sonyaka kwimveliso yentengiso kwintengiso zikaGoogle, uSidecar ucebisa ukuba abathengisi be-e-commerce baphinde bacinge ngeendlela zabo kwaye bafumane indawo emhlophe. Inkampani ipapashe uphando kwiNgxelo yeBenchmarks ye2020: Iintengiso zikaGoogle kuRhwebo, isifundo esibanzi ngokusebenza kwecandelo lentengiso kwiiNtengiso zikaGoogle. Iziphumo zeSidecar zibonisa izifundo eziphambili kubathengisi ukuba baqwalasele yonke i-2020, ngakumbi phakathi kobume bendalo obenziwe kukuqhambuka kwe-COVID-19. I-2019 yayinokhuphiswano ngakumbi kunangaphambili,
NgoMvulo, Juni 3, 2019 NgoMvulo, Juni 3, 2019 Douglas Karr
Umbuzo endisawubuzwa nangabanini bamashishini abaqolileyo kukuba ngaba kufuneka benze intengiso-ngokucofa (PPC) ngentengiso okanye hayi. Ayisiyo ewe elula okanye akukho mbuzo. I-PPC ibonelela ngethuba elimangalisayo lokutyhala iintengiso phambi kwabaphulaphuli kukhangelo, kwezentlalo nakwiiwebhusayithi onokuthi ungafikeleli kuzo ngeendlela ze-organic. Yintoni intengiso yokuHlawula ngokuCofa? I-PPC yindlela yentengiso ekwi-Intanethi apho umthengisi ahlawula khona
Zeziphi ezona zakhono zibalulekileyo zokuthengisa ngo-2018?
NgoMvulo, Oktobha 1, 2018 NgoLwesibini, Oktobha 2, 2018 Douglas Karr
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bendisebenza kwikharityhulamu yoomasifundisane bokuthengisa ngokwedijithali kunye neziqinisekiso zenkampani yamanye amazwe kunye neyunivesithi, ngokwahlukeneyo. Kube luhambo olumangalisayo-ukuhlalutya ngokunzulu indlela abathengisi bethu abalungiselela ngayo kwiinkqubo zabo ezisemthethweni, kunye nokuchonga izikhewu eziza kwenza ukuba izakhono zabo zithengiswe ngakumbi emsebenzini. Isitshixo kwiinkqubo zesidanga sendabuko kukuba ikharityhulam ihlala ithatha iminyaka eliqela ukuba yamkelwe. Ngelishwa, loo nto ibeka izidanga
Umahluko phakathi kwe-SEO kunye ne-SEM, iiNdlela eziBini zokuFumana ukugcwala kwiWebhusayithi yakho
NgoLwesibini, Agasti 28, 2018 UKenneth Evans
Ngaba uyawazi umahluko phakathi kwe-SEO (ukuSebenzisa iiNjini zoKhangelo) kunye ne-SEM (ukuThengisa iiNjini zoKhangelo)? Ngamacala amabini engqekembe enye. Zombini ezi ndlela zisetyenziselwa ukubamba ukugcwala kwiwebhusayithi. Kodwa enye yazo ikhawuleze ngakumbi, kwixesha elifutshane. Kwaye enye kutyalo-mali lwexesha elide. Ngaba sele uqikelele ukuba yeyiphi eyona ilungileyo kuwe? Ewe, ukuba awazi, apha